musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Chii chitsva muBahamas muna Chikunguru
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Bahamas inofamba panguva yekudonha uye yechando
Nguva yezhizha muBahamas iri mukutenderera kuzere, uye kushanya kuri kupisa pamusoro penzvimbo gumi nenhanhatu dzezvitsuwa zvine nzira dzakareruka dzekuti vafambi vasvike uye vaongorore kumahombekombe.
Katanhatu-nguva James Beard Mubayiro-anokunda chef Marcus Samuelsson achatanga kuresitorendi yake nyowani, Baha Mar Fish + Chop House, kuBaha Mar muna Chikunguru 12.
Grand Bahama Island iri kuunza Dive Grand Bahama.
Mubairo-kuhwina hotera, spa uye yakasarudzika chitsuwa iri muNassau, Sandals Royal Bahamian Sandals Royal Bahamian, vakazivisa kuvhurwa musi waNdira 27, 2022.
Kupora kunzvenga kungori kukanda ibwe kure nezvakawanda zvezvibvumirano uye unofanirwa-kushanyira zviitiko kuti unakirwe.
Baha Mar Inogamuchira Marcus Samuelsson's Nyowani Yekudyira - Katanhatu-nguva James Beard Mubayiro-anokunda chef Marcus Samuelsson achatanga kuresitorendi yake nyowani, Baha Mar Hove + Chop House, kuBaha Mar muna Chikunguru 12, kutsvagisa freshest zvigadzirwa zvemuno uye zvegungwa zveBahamian, izere neimba yekudyira ine simba uye padenga repabhawa.
Kutanga-Kwese Kudhira Grand Bahama Chiitiko - Grand Bahama Island iri kuunza Dhiza Grand Bahama, kuungana kwemazuva mashanu kweBahamas Dive Ambassadors, ese akavhurika emvura akavhurika uye vanoita zvemuno, kubva muna Chikunguru 19-23, 2021. Nzvimbo dzinonakidza dzekushinyira dzinosanganisira kupunzika, matombo uye kusangana kweCaribbean reef shark.
Sandals Royal Bahamian Inowedzera Kugadziridza Projekiti - Mubairo-kuhwina hotera, spa uye yega chitsuwa chiri muNassau, Shangu Royal Bahamian, yakazivisa zuva rekuvhurazve raNdira 27, 2022. Izvo zviri kuitika zvemamirioni emadhora ekugadzirisa Coconut Grove, yakakura nzvimbo yekutandarira inowedzera kumahombekombe vibes kusvika pakati peiyo resort.
Graycliff Heating Up - Kugamuchira mbiri dzakakurumbira dzebasa rinoshamisa, Greycliff Hotel akaremekedzwa nekuda kweiyo 33rd akateedzana gore ne Mubairo Mukuru in Waini Mucherechedzi 2021 Restaurant Awards uye rakava bhizinesi rekutanga muBahamas kupihwa iyo yeVafambi Health Assurance Stamp ye "Healthier Safer Tourism" neCaribbean Public Health Agency.
Maodzanyemba akadziva kumadokero Airlines Anosheedzera Nhoroondo dzeNhambau - Southwest Airlines yakasimbisa kudzoka kwendege dzezuva nezuva kuNassau kubva kuFort Lauderdale-Hollywood International Airport uye svondo rebasa kubva kuBaltimore / Washington International Thurgood Marshall Airport kutanga Gumiguru na7, zvichiteerana.
Royal Caribbean Rwendo rweMakungwa Zviteshi zveMahara muBahamas - Mwedzi wapfuura, Ruzivo rweMakungwa yakapedza musangano wayo wekutanga wekutamisa dzimba kuGreat Bahama Island. Iye zvino kupa husiku husiku husiku kubva kuNassau, chiitiko ichi chine mazuva maviri ekumashure-kumashure ekunakidzwa paPerfect Day kuCocoCay uye zuva rakazara rekuzorora pamahombekombe egungwa jena-Grand Bahama Mugovera wega wega muzhizha rose.
MSC Cruises Inotangazve US Kufamba - MSC Cruises yakazivisa kutangwazve kwekufamba kwayo kuenda kuBahamas mukati meMSC Divina kutanga Gunyana 16, 2021. Ngarava ichamira pachitsuwa chayo cheBahamian, Ocean Cay MSC Marine Reserve. Mugshot yava kuwanikwa.
Kutsigira uye ZVIPO
Kuti uwane yakazara rondedzero yezvibvumirano uye mapakeji eBahamas, shanya www.bahamas.com/deals-packages.
Bahama Kunze Kwezvitsigiro Ekusimudzira Bhodhi $ 250 Mhepo Kiredhiti Inopa - Vafambi veUS neCanada vanogona kubhuka pasuru yehusiku yehusiku huna kana kupfuura pane imwe yemahotera eBahama Out Islands Ekusimudzira Bhodhi uye vanogamuchira $ 250 mhepo kiredhiti. Kubhuka hwindo: ikozvino - Chikunguru 31, 2021.
Bahamian Rorusununguko Zuva reKupemberera naDJ Kid Nyowani –Pemberera Zuva reRusununguko rweBahamian aine mumwe wevateereri vekuSouth Florida vanonyanya kutsvakwa, DJ Kid Fresh, Chikunguru 9-11, 2021 Mapakeji anotanga pamadhora mazana mana nemakumi masere pamunhu pamunhu kusanganisira yekufamba-famba kwekufamba-famba, kugara kweHilton Hotel, kuwana zviitiko kuHilton Hotel nekuwana Resorts World. Bimini Beach.
Budget Shamwari Yekushanda -Kana iwe uchitsvaga imba kure nemusha yebasa rako rinotevera kuenda kuBahamas, usatarise mberi! Bell Channel Inn iri kupa pamwedzi uye pamakota mitengo yekufamba izvozvi kusvika Zvita 31, 2021.
Yakawedzerwa Gara Package muParadhiso - Bhuka imwe yekugara pasuru pa Paradise Cove Beach Resort uye tinogamuchira makumi mana kubva muzana pamutengo wezuva nezuva. Kubhuka hwindo iko zvino kusvika Zvita 40, 31.
Yepedyo Muchato weVaviri muThe Exumas - Dzivisa kusagadzikana kwekuronga muchato gore rino; rega Embrace Resort inobata zuva rako hombe uye gamuchira a mhemberero yakapusa asi yepedyo neako akakosha mamwe uye vashoma vaunoda. Mitengo inotanga pamadhora mazana maviri nemakumi matatu nematatu kusanganisa nemuchato wemuchati, gurukota kana kururamisira kwerunyararo nekutora mifananidzo yealbum yako yemuchato.
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, Iyo Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kupukunyuka nzira inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hunyanzvi hwepasi rose hwekuredza, kudhiraivha, kukwasva, kubhururuka, uye zviitiko zvakasikwa, zviuru zvemamaira emvura anoyevedza epasi uye mahombekombe akajeka akamirira mhuri, vakaroora uye vafambi. Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.
Dzimwe nhau nezve The Bahamas
IMEX America: Kana isu tichida chitsva chakajairika, tiri kuenda ku ...
Lufthansa Inobhururuka 76,000 Vanhu Vanobva kuFrankfurt Airport ...
Ndege muChina ona yakagadzikana Kudzoreredza
Vatungamiriri vepamusoro vezvekushanya kuti vashanyire Jamaica yepamusoro-soro ...
Vols izvo zvichiri kushanda paBangkok Airways
Red Tourism inoputika muChina muna 2021
Sustainable Aviation Fuel yava kuwanikwa kunendege ku ...
Jamaica Tourism Gurukota: Kuwedzeredza kuedza ku ...